Muuri News Network » SAWIRO: Xildhibaano katirsan BF oo Wada qorshe hurdada u diiday Shariif Xasan.
SAWIRO: Xildhibaano katirsan BF oo Wada qorshe hurdada u diiday Shariif Xasan.
Xildhibaano katirsan Baarlamaanka Dowlada Federaalka Soomaaliya iyo Siyaasiyiin caan ah ayaa ka shaqeenaya dhismaha maamul ka madax banaan kan Koonfur Galbeed oo laga dhisayo Degmooyin iyo deegaano katirsan Gobolka Bakool.
Xildhibaanadan iyo Siyaasiyiin la socda ayaa ku sugan Deegaano katirsan Gobolka Bakool halkaas ay kulamo wadatashi kula leeyihiin waxgaradka ku dhaqan iyo bulshada qeybaheeda kala duwan, waxa ayna doonayaan Xildhibaanadan in Deeganadaasi ay joogaan loo dhiso maamul gaar ah.
Sida aan Wararka ku heleyno Xildhibaanadan ayaa tagay Degmada Ceel Barde iyo Deegaano ay kamid yihiin Caato, iyo Yeed halkaas ay kulamo kala duwan kula qaateen waxgaradka iyo bulshada ku dhaqan goobahaasi.
Xildhibaan C/ladiif Muuse Nuur (Sanyare) oo kamid ah Xildhibanada ku sugan Gobolka Bakool ayaa sheegay in ay wadaan meel fiicana uu u marayo qaban qaabada shir ay maamul ugu dhisayaan Degmooyin iyo Deegaano katirsan Gobolka Bakool aa oo lagu qabanayo Degmada Ceel Barde.
Waxa uu xusay Xildhibaanka in maamulka ay dhisayaan uu yahay mid hoostagaya Dowlada Federaalka Soomaaliya balse ka madax banaan kan maamulka Koonfur Galbeed uu Madaxweynaha ka yahay Shariif Xasan Sheekh Aadan.